Tirada Joojinta Casriga ah ee xiran ee Kocaeli | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara41 KocaeliTirada Casriga ee Casriga ah ee Kocaeli
Tirada Casriga ee Casriga ah ee Kocaeli
01 / 02 / 2019 41 Kocaeli, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Kocaelide waxay kordhineysaa tirada joogsiga casriga casriga ah
Raadiyaha, oo loo isticmaalo nolol maalmeedka oo ay ka mid yihiin waxyaabaha aasaasiga ah ee adeegyada rakaabka, ayaa la dayactirayaa. Baaxadda adeegyada ay qabatay Waaxda Gaadiidka Dadweynaha ee Degmada Kocaeli, joojinta waxaa la casriyeeyaa si loogu suurtageliyo muwaadiniinta in ay u raraan si nabadgelyo leh. Kumanaan mitir oo 250 ah ayaa la siiyaa muwaadiniinta. Intaa waxaa dheer, degmada magaaladu waxay sidoo kale sameysey meel ku meel gaar ah oo joogta ah meelaha ay u baahan tahay bilaha jiilaalka si looga hortago muwaadiniinta inay ka cabanayaan cabashooyinka. Joojinta ku meelgaarka ah ayaa markaa lagu bedelayaa joogsiga casriga ah.
XADIISKA JOOJINTA 1250 WAXAY YIRA
Dawlada Hoose ee Kobanheere waxay fulineysaa adeegyo muhiim ah si looga hortago muwaadiniinta in ay dhibaato ka haysato gaadiidka magaalada oo dhan. Aagga caasimadda, oo bixiya adeegyo badan oo ay ka mid yihiin jaranjarada, baaskiilada iyo jidadka cusub ee magaalada, ma dayacin dhismaha duruusta casriga ee qodobadan. 2018, dhammaan Kocaeli, xarumaha casriga ah ee leh goobaha jidhka iyo meelaha lagu fadhiisanayo ee ka samaysan hilib aan saliid lahayn, oo leh muuqaal, oo leh dhinacyo iyo dhinacyo dhinacyo badan leh, ayaa la geeyaa meelo dhexe oo lagu go'aamiyey sida cufnaanta rakaabka.
JOOJINTA NORMAL NAFAQADA MA JIRA
Degmada Kanton City waxay sii wadaa inay ka shaqeyso soo saarista joogsiga casriga ah ee casriga ah iyada oo loo eegayo baahida muwaadiniinta, bilaha jiilaalka si looga hortago dhibbanaha ku-meel-gaadhka ku-meel-gaarka ah ee joogsiyada caadiga ah. Joojinta joogtada ah ee joogtada ah ayaa markaa isku diyaari doona magaalada caasimadda sida ku haboonaanta xaaladaha cimilada.
Adeeg Wi-Fi oo bilaash ah
Joojinta casriga ee ay sameeyeen degmooyinka magaalooyinka ee Kocaeli ayaa ah dhererka 36 muddo dheer. Saldhigyada casriga ah ee leh dhibcooyinka dhibcaha ee taleefannada gacanta iyo kumbuyuutarrada, dhibco kaararka magaalada, shaashadaha macluumaadka rakaabka oo muujinaya saacadaha basaska iyo dariiqyada, iyo kursiga kuraasida ee aan naafada ahayn ee naafada. Rakaabka ayaa ka faa'iideysan kara rugta Wi-Fi-ga bilaashka ah ee hawada ku jirta marka ay sugayaan basaska.
Tirada Isticmaalka Isticmaalka Casriga ee Kocaeli
Joogitaanka Saddexaad ee casriga ah ayaa loo joojiyay Umutepe ee Kocaeli
Kocaeli oo gaashaanka ku dhuftay dayac-tirka casriga casriga ah
Dib u-kicinta Wax-soo-saarka Soo-saaridda Wax-soosaarka Modern-ka DCS
Goobta casriga ee Konyada waxay joogtaa degmooyinka
hawo qaboojiye ah oo dabiiciga ah
Dhismaha Casriga ee casriga ah
Maalgashiga Nidaamka Isgaadhsiinta Dheecaan Qaadasho Qaadasho ah ee Izmir